DEG DEG | Khilaafka Madaxweynaha & Gudoomiyaha Baarlamanka oo Cirka isku shareeray & Kursiga MD oo halis kujira – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA DEG DEG | Khilaafka Madaxweynaha & Gudoomiyaha Baarlamanka oo Cirka isku shareeray & Kursiga MD oo halis kujira
DEG DEG | Khilaafka Madaxweynaha & Gudoomiyaha Baarlamanka oo Cirka isku shareeray & Kursiga MD oo halis kujira
Khilaaf culus ayaa soo kala dhaxgalay Madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo Guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi, waxa uuna khilaafkooda saameeyay Labada Gole ee Baarlamaanka iyo Fulinta ee Jubbaland.
Warar ay heshay Puntland FM ayaa sheegaya in mudooyinkii dambe uu jiray Khilaaf cirka isku sii shareeyay kaas oo aan wali banaanka usoo bixin waxa uuna salka ku haayaa waxqabadka Golaha wasiirada ee Jubbaland doorashada soo socota ee maamulkaasi oo dhawaan dhici doonto.
Shiikh Cabdi Maxamed Guddoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulkaasi ayaa isku haaya Arimo la xariira waqtiga madaxweynaha oo ku eg 15- August ee sanadkaan xiligaas oo ku began doorashadii Axmed madoobe ee 2015.
Axmed Madoobe oo wada qorshe uu dib ugu dhigayo doorashada Madaxweynaha ee sanadkaan waxaana gaabis badan galay hay’adaha amaanka Guud ahaan shaqada hay’adda fulinta sida ay sheegayn dad aan la hadalnay.
Sidoo kale Xildhibaano taageersan Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa Puntland FM u sheegay in madaxweynaha iyo Guddoomiyaha ay wadaagayn xog ku saabsan qaabka doorashada taas oo la sheegay in guddoomiyaha ay u cuntami weysay waxaana halkaasi ka bilaawday Khilaaf u dhaxeeya labada Mudane.
Sidoo kale Khilaaf labada mudane ayaa la sheegay in ay qayb ka tahay Cabasho ay qabaan inta badan beelaha daga deegaanada jubbaland 3-da Gobal, muran ka taagan dhinaca Dhulka.
Talaabadii ugu dambeysay ee muranka dhinaca dhulka ayaa dhacday Bartimihii bishaan kadib markii Madaxweyne Axmed Madoobe uu dhagax dhigay Xaafad cusub oo laga dhisayo Kismaayo, waxaana Ganascatada dhisayso ka mid ah Shiikh Maxamed Cabdi Umul iyo kuwa kale.
Xildhibaano ka tirsan Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay kismaayo iyo Qaar ka mid ah Xildhibaanada Jubbaland ayaa is hor taagay dhismahaas waxaana la sheegay in aan wali murankaas xal loo helin.
Wararkii ugu dambeeyay ee gobalka ayaa sheegaya in ay taagan tahay xiisad siyaasadeed kadib markii ku dhawaad 50 xildhibaan ay saxiixeyn mooshin Kalsoonida lagala noqonayo Wasiirada Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa la sheegay in uusan sameyn wax abaabul ah oo looga hortagayo mooshinka ku wajahan Golahiisa Wasiirada balse ay jirto hanjabaad loo geysanayo qaar ka mid ah xildhibaanadii gudbiyay mooshinka.
Xildhibaano ka gaabsaday in aan adeegsano magacooda iyo codkooda ayaa Puntland FM u sheegay in la soo wacay loona hanjabay waxaana durba la sheegay in qaar ka mid ah ay ka laabtayn mooshinkii ay gudbiyeen.
Dhamaan xildhibaanada Gudbiyay mooshinka ayaa ah kuwa taageersan guddoomiyaha Baarlamaanka ee jubbaland, khilaafkaan ka dhax jira madaxda juubaland ayaa saameeyay safari gudaha iyo dibadda uu ku aadi lahaa Madaxweyne Axmed madoobe sida ay sheegayaan wararka aan helnay.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam “Axmed Madoobe” ayaa la doortay 15-kii Bisha August ee sanadkii 2015 maalin sabdi ah waxa uuna helay 68 ka mid ah Codadka Baarlamaanka Jubbalnad, waxa uuna ka guuleestay Labo murashax oo la sheegay in isaga uu keensaday.
Axmed Madoobe laba jeer uu madaxweyne ka noqday Jubbaland maamulkiisa ma dhaafin Kismaayo sidoo kale golahiisa wasiirada malahan Xafiisyo ay ku shaqeeyaan Guud ahaan gobalka jubada dhexe waxaa maamula Al-shabaab gobalka jubada Hoosane waa adagtahay in si fudud loogu socdaalo degmooyinka ay ka joogaan Ciidamada jubbaland iyo kuwa Kenya halka gobalak Gedo-ne inta badan aan laga taageersaneen maamulkaasi.